Kedu ka ebili mmiri si etolite na gịnị ka anyị ga-eme? | Netwọk Mgbasa Ozi
Kedu ka ebili mmiri si etolite na gịnị ka anyị ga-eme?
Anyị anụla banyere tsunamis ọtụtụ oge. Ndị a bụ ebili mmiri na-ebugharị ebugharị site na nnukwu ebili mmiri site na ala ọma jijiji n'okpuru mmiri. Enwere ike ịmalite ya site na mbuze mbuba, ugwu mgbawa ma obu meteorite.
Anyị ahụla ezigbo nsogbu na mmebi nke enwere ike ibute mgbe mbufịt na-eme. Anyị amatala etu esi kpụọ ha na ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịdọ aka ná ntị tsunami?
1 Kedu otu mbufịt si amalite
2 Kedu ihe a na-eme ma ọ bụrụ na tsunami?
Kedu otu mbufịt si amalite
N'elu mmiri, ebili mmiri tsunami nwere ike ịbụ ọtụtụ puku kilomita n'ogologo na oke obosara. Ọzọkwa, n'ime oke osimiri, ebili mmiri nwere ike ịga njem dịka ụgbọelu, na-eru 600 kilomita kwa elekere (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku kilomita kwa elekere) yana, mgbe ha ruru n'ụsọ mmiri, mepụta ebili mmiri karịrị mita iri atọ.
Mmiri ebili mmiri anaghị ebuli elu ruo mgbe ha rutewere n'ụsọ oké osimiri. N'ihi nke a, ụgbọ mmiri ndị na-arụ ọrụ n'oké osimiri enweghị ike ịhụ ebili mmiri, ebe ọ bụ na ebili mmiri ebilibeghị.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị tsunamis niile na-emebi emebi, ha niile nwere ike ịdị ize ndụ, ebe ọ bụ na ebili mmiri na-amalite na 12 sentimita asatọ, ebili mmiri site na ala ọma jijiji ala mmiri nwere ike iru 100 ụkwụ elu ha na-agbasa n'akụkụ niile ma mgbe ha ruru n'ụsọ oké osimiri ha na-eto elu.
Mgbe ala ọma jijiji ahụ mere, ogologo oge ole ka ọ ga-ewe tupu ebili mmiri ahụ erute n’ikpere mmiri? Ọfọn nke a dabere na ụdị tsunami. E nwere ụdị abụọ:
Nke mbụ, ihe a na-akpọ "mpaghara" ma ọ bụ "dị nso na etiti etiti" nke ala ọma jijiji nwere ike ịmalite na nke na-ewe naanị minit ole na ole iji rute n'ụsọ oké osimiri.
Typedị tsunami nke abụọ bụ "ebe dị anya" ma ọ bụ ala ọma jijiji mere ọtụtụ narị kilomita ma ọ nwere ike iburu site na elekere atọ ruo 22 iji ruo ebe ndị dị n'ụsọ oké osimiri.
Kedu ihe a na-eme ma ọ bụrụ na tsunami?
Iji mata ịdị adị nke tsunami ị ga-enye akara ndị a:
Na osimiri ị pụrụ ịhụ otú n'ụsọ oké osimiri atalata.
Ọ bụrụ na ịnọ n'ụsọ osimiri wee nwee mmetụta na ala ọma jijiji nke ga-ewe ogologo oge ma ọ bụ nwee ike imebi ndị mmadụ, ị mara na mbufịt ga-ewere ọnọdụ.
Nwee nnukwu mbigbọ na-ada site n'oké osimiri
Mgbe enyere akara ndị a, ị kwesịrị ịga n'ime obodo, hapụ ụsọ oké osimiri wee gbagoro dị ka o kwere mee na ịdị elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Idei mmiri » Kedu ka ebili mmiri si etolite na gịnị ka anyị ga-eme?
Ihe omuma a weputara bu ihe nmasi nma karie ihe nile bu ihe ojoo banyere ihe na-eme banyere okpomoku uwa, na otutu ndi mmadu anaghi achoputa egwu di egwu nke di ndu n’elu uwa.
Nzaghachi ka walter Gallo
Oke ohia ndi ozo di iche-iche nwere ike iguzogide unwu
Vidio: Olee otu ifufe ifufe na-emetụta ahụ mmadụ?